Weftigii uu Hoggaaminayey Guddoomiyaha KULMIYE oo dalka ku soo Laabtay, kana Xogwarramay Safarkoodii | Berberanews.com
Home WARARKA Weftigii uu Hoggaaminayey Guddoomiyaha KULMIYE oo dalka ku soo Laabtay, kana Xogwarramay...
Weftigii uu Hoggaaminayey Guddoomiyaha KULMIYE oo dalka ku soo Laabtay, kana Xogwarramay Safarkoodii
Wajaale-29,Dec,2011- (Berberanews)- Weftigii uu hoggaaminayey Guddoomiyaha xisbiga talladda haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal qaatay muddo laba toddobaad ah oo ay ugu maqnaayeen dalka Shiinaha.
Weftiga oo socod dhulka ah maanta duhurkii ku yimi magaalada Tog-wajaale ee xuduudka Somaliland la wadaagto Itoobiya, ayaa si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey iyadoo ay qaabileen dadweynaha reer Jawaale, masuuliyiin ay ka mid yihiin Xoghayaha guud ee xisbiga KULMIYE Xasan Siciid Yuusuf, Agaasimaha guud ee Wasaarada Warfaafinta Faysal Cali Sheekh, Madaxa baratakoolka madaxtooyada Maxamed Cilmi, Xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada, maamulka gobolka Gabiley iyo taageerayaal fara badan.
Guddoomiyaha xisbiga talladda haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo hadal kooban u jeediyay dadweynaha Wajaalle, ayaa si weyn ugu mahad celiyay taageereyaashii iyo masuuliyiintii soo dhaweeyay.
“Dadweynaha magaalada Wajaale yar iyo weynba aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa, maalin kasta oo aannu halkan soo marnaba xil weyn ayey iska kayo saaraan siyaabo badan awgood, waxaad na tustaan qalbi wanaagsan, walaaltinimo, xisbinimo iyo dadaal dheeraad ah Alle ha idinka jasaa’i siiyo,” ayuu yidhi Muuse Biixi.
Guddoomiyaha KULMIYE waxa uu si kooban uga hadlay socdaalkii ay ku tageen wadanka Shiinaha, waxaannu yidhi, “Waxaannu tagnay dalka Shiinaha oo aannu ugu tagnay umad Ilaahay uun tiradooda yaqaanno oo aad maqasheen, kuwaas oo aad iyo aad u danaynaya dhulkeena, dadkaasi malaha dhulkeena wax aynaan ku ogayn ayay ku ogyihiin qof waliba wuu ku waydiinayaa oo waan imanayaa ayuu ku odhanayaa. Waxaa filayaa in dhawaan dad badani inooga iman doonaan oo u badan qolada ganacsada ah oo aad u danaynaya dalkeena.”
Afhayeenka xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed oo ka mid ahaa xubnaha weftiga, ayaa isna faahfaahin ka bixiyey safarkooda oo uu sheegay inuu ahaa mid ay martiqaad rasmi ah kaga heleen xisbiga talada dalka Shiinaha haya, isla markaana uu ugu soo dhammaaday si guul ah.
“Muddadii aannu joognay dalka Shiinaha waxaannu la kulanay masuuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya iyo xukuumadda iyo dad badan oo ka mid ah bulshada ganacsatada ee dalka Shiinaha, waxaannu soo marnay ilaa afar gobol, waxaannu tagnay laba gobol oo ardayda reer Somaliland ee waddankaasi wax ka bartaa ugu badan yihiin, annaga oo kula kulanay gobol ay isugu yimaadeen iyaga oo ay nala socdaan rag masuuliyiinta Shiinaha ahi nala socdaan.
Waxaannu la tagnay bal in aannu xog-warran ka bixino xaalada Somaliland, iyada oo aynaan xidhiidh fara badan la lahayn dawladda Shiinaha iyo iyaga oo su’aalo badan qaba oo danaynayey, maadaama ay dano fara badan oo ganacsi halkan ka leeyihiin. Waxyaabaha ay danaynayeen waxa ka mid ah arrimaha ammaanka, budhcad-badeedka, nabadgelyo-darrada ka dhacda Soomaaliya oo magacii inaga dhaxayn jiray ay isku keen khaldaan,” ayuu yidhi Maxamed Kaahin.
Afhayeenka KULMIYE waxa uu tilmaan ka bixiyey qodobada ay kala hadleen masuuliyiinta Shiinaha, waxaannu yidhi, “Annagu waxaannu si fiican ugu sharraxnay qadiyadda Somaliland, waxyaabaha ugu badan ee aannu kala hadalnay waxay ahaayeen; deeqaha waxbarashada oo aannu ku nidhi mucaawino ayaad weligiin siin jirteen Soomaaliya inay qaybteenii ina siiyaan, biyo soo-saarka oo Shiinuhu aad ugu fiican yahay ayaanu kala hadalnay, dhismaha waddooyinka iyo arrimaha maalgelinta oo aad moodo inay aad u danaynayaan in Somaliland dihinyahay. Dawladda Shiinaha waxyaabaha aannu kala hadalnay waxa ka mid ahaa ganacsiga Somaliland 97% waxa lagu isticmaalo marka laga reebo shidaalka waxa uu ka yimaadaa dalka Shiinaha, markii ay budhcad-badeeda ka hadlayeen waxaannu ku nidhi Somaliland waa ta keliya ee budhcad-badeeda la dagaalanta ee xidhxidha ee jeelasheeda boqolaal ku xidhan yihiin ee ilaalisa badeeda oo ku dhow 700KM, markaa maraakiibta ayaanu ilaalinaaye kaalaya nala ilaaliya.
Runtii waxa nooga muuqanayey inay aad u danaynayaan Somaliland wax la qabsigeeda, iyaga oo jawaabihii nagu soo noqonayey ay ahaayeen in bilowga sannadka cusub ay dad badani iman doonaan Somaliland,” ayuu hadalkiisa ku soo gebogabeeyey Maxamed Kaahin Axmed.
Previous articleWiilka ugu yar Carruurta uu dhalay Hoggaamiyihii geeriyooday ee Kuuriyada Waqooyi oo maanta loo caleemo-saaray jagadii Aabbihii
Next articleShalay iyo Maanta : Farqiga u dhexeeya darreennada, muuqaallada iyo weedhihii Munaasibadihii Xil-wareejinta Maamulka Dekedda Berbera.Qaybta 2aad